Tonga ny mpitandro filaminana nandrava, saingy rehefa maizina dia nisy tora-bato. Voatery nanapoaka basy nanao tifi-danitra, narahina baomba mandatsa-dranomaso ny nataon'ny mpitandro filaminana nanaparitahana ny olona.
Niala ny mpitandro filaminana taorian’izay ary niangavy ny olona mba tsy handoro ny trano sao hiitatra amin'ny manodidina ka hitera-doza. Vao lasa anefa ny mpitandro filaminana dia norobain'ny olona sy nopotehin'izy ireo ny trano sy ny entana. Androany maraina io aza dia mbola mitohy ny fitaoman'ny olona entana sy hazo isan-karazany.